IPhone 8 na-eguzogide ọgwụ karịa ka ọ dị ka ọ dị na mbụ | Akụkọ akụrụngwa
El iPhone 8 Ọ dịlarị na ahịa ma na nke a nyocha mbụ ma ọ bụ vidiyo na nguzogide nke ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ nke Apple amalitela ịbịaru. Ọ bụ ezie na ị nwere ike iji anya gị hụ ya na vidiyo nke na-ebute isiokwu a, anyị nwere ike ịgwa gị na nchekwa zuru oke na iPhone 8 na-eguzogide ọgwụ karịa ka ọ dị, n'agbanyeghị iko ọhụụ nke gbara ya gburugburu.
Ma ọ bụ ya N'ime ule ndị a ma ama, nke JerryRig mere ihe niile, egosiri na iPhone ọhụrụ ahụ nwere ike iguzogide ọtụtụ nrịba na ụdị ngwa ọ bụla yana ọbụlagodi ihe ọkụkụ sịga na-acha ọkụ., na na mbụ a nwa akara na ihuenyo, nke kpamkpam mgbe sekọnd ole na ole.
Malite site na mbido, oyi akwa Gorilla Glass nke ihuenyo na-enye nguzogide dị elu, ọ bụkwa na ihuenyo nke iPhone 8 ọhụrụ ahụ amaliteghị igosipụta mmebi ruo mgbe ncha nke ọkwa 6. Anyị chọtara ihe dịka nsonaazụ ahụ mgbe ị na-anwa tụọ azụ azụ, nke, n'adịghị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile nwere ike iche, na-ejide ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ma ọ bụ ebumnuche imebi iko ahụ.
Banyere ohere nke mpịachi iPhone 8, dịka o mere n'oge na-adịghị anya site na iPhone, anyị nwere ike ichefu banyere ya, ọ bụkwa iko ahụ na-enye nkwekọ ka ukwuu na njedebe, na-eme ka ọ fọrọ nke nta agaghị ekwe omume apịaji ya, ma ọ dịkarịa ala n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ karịa (jiri aka gị).
Kedu ihe ị chere banyere nguzogide dị elu nke iPhone 8 ọhụrụ ahụ?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » IPhone 8 na-eguzogide ọgwụ karịa ka o yiri ka ọ na-ele ya anya
Ọtụtụ ígwè ọrụ na-eme ezi uche dị na ya n'ihi ekele ndị a dị nro